Maresitorendi nemabhawa eMoscow izvozvi zvinoda humbowo hwejekiseni reCOVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kuputsa Russia Nhau » Maresitorendi nemabhawa eMoscow izvozvi zvinoda humbowo hwejekiseni reCOVID-19
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Russia Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Uchapupu hwekudzivirira kweCOVID-19 izvozvi zvave kuda kushanyira maresitorendi nemabhawa eMoscow
Ivo chete vane humbowo hwekubaiwa, humbowo hwekuti vane coronavirus mukati memwedzi mitanhatu yapfuura, kana kuongororwa kwePCR mukati memazuva matatu apfuura vachapihwa chitupa chedigital.
Vagari veguta izvozvi vanofanirwa kuongorora kodhi yeQR vasati vapinda munzvimbo dzekugamuchira vaeni.
Kubva munaJune 28, chirongwa ichi chichava "chinosungirwa kune maresitorendi nemakamuri ese anoda kuramba achishanda senguva dzose."
Vaya vakangove nepfuti imwechete yekudzivirira vanonzi vanokodzerawo pasi pechirongwa.
Zvibvumirano zvitsva zveCOVID-19 zviri kuziviswa muguta guru reRussia kune avo vasati vagamuchira coronavirus jab kana vane hutachiona.
Moscow Meya Sergey Sobyanin vazivisa mutemo mutsva unorwisa-COVID nhasi uyo unoda kuti vagari veguta vatarise kodhi yeQR vasati vapinda munzvimbo dzekugamuchira vaenzi dzinosanganisira nzvimbo dzekudyira, matare ezvikafu, nzvimbo dzekudyira nedzimwe nzvimbo dzeveruzhinji.
Ivo chete vane humbowo hwejekiseni, humbowo hwekuti vane coronavirus mukati memwedzi mitanhatu yapfuura, kana kuongororwa kwePCR mukati memazuva matatu apfuura vachapihwa chitupa chedigital. Vaya vakangove nepfuti imwechete yekudzivirira vanonzi vanokodzerawo pasi pechirongwa.
"Mamiriro ekupararira kweCovid anoramba akaomarara," akadaro meya. “Kune vanhu vanodarika zviuru gumi nezvina vanorwara zvakaipisisa muzvipatara. Utano hwakanyatsogadzirwa. ”
Kubva munaJune 28, chirongwa ichi chichava "chinosungirwa kune maresitorendi nemakamuri ese anoda kuramba achishanda senguva dzose." Kudya kwekutora uye kuendesa ichave iri yega sarudzo inowanika kune avo vasina QR kodhi. Mamiriyoni maviri evanhu muguta guru reEurope vanonzi vakatogamuchira yavo yekutanga dhosi.
Guta ratove rakarambidza husiku husiku, nekurambidzwa kwemavhiki maviri kumabhawa uye makirabhu anoshandira vafundisi apfuura 11pm.
Panguva imwecheteyo, mutemo wekare wairambidza zviitiko zvevazhinji wakasimbiswa, zvichidzivirira nzvimbo kubva kuva nevatengi vanopfuura mazana mashanu pa-saiti chero nguva.
Svondo rapfuura, Moscow yakave iro guta rekutanga pasirese kuita nhomba yekumanikidza kune avo vari munzvimbo dzakatarisana neruzhinji. Mabhizimusi mumaindasitiri akaita sekugamuchira vaeni, kutakura uye varaidzo anofanirwa kuratidza kuti 60% yevashandi vavo vakagamuchira jab kana zvimwe vakatarisana nezvikwereti zvakakurisa. Vakuru vakasimbisa kuti makambani anogona kumisa vashandi vasina mubhadharo kuti vasangane nezviga zvavo. Mitemo yakafanana yakaiswa muSt. Petersburg nedzimwe nzvimbo dzeRussia.
Pakutanga nhasi, mumiriri wezvekodzero dzevanhu muRussia, Tatiana Moskalkova akati chiitiko ichi "mutambo wekusatendeseka." Vakati "mashandiro airi kuitwa ari kuwedzera kurwara kwepfungwa uye kuita kuti vanhu vatye kumanikidzwa."